Qeybtii 2aad: Wax Ka Baro Shabeelka -The Tiger | HimiloNetwork
Qeybtii 2aad: Wax Ka Baro Shabeelka -The Tiger
Posted by: Zakariya in Deegaankeenna December 11, 2015	0 594 Views
Muqdisho (Himilonews) – Kolka ay dilanayaan xoolaha waaweyn, waxay doorbidaan inay rubadda ku dhagaan neefka oo ay miciyahooda xooga leh ku dhex-dusiyaan iyaga oo dhulka kusii gujinaya—jeer neefku uu qabsin-ood u dhinto. Habkan, wuxuu badi ku dilaa xoolo uu kamid yahay Lo’-duureedka—oo lix jeer ka culeys badan Shabeelka. Inkasta oo ay horor-dilan karaan noolaha waaweyn, hadana dhashooda ay doorbidaan inay dishaan. Marka ay neef dishaan, badi waxay u jiitaan haraca. Tani waxay ku tahay shaqo adag. Waxayna u baahnaan kartaa awood-jireed xoog badan. Dhacdo gudaheed, waxaa la tebiyaa in, mar uu dishay neef qiro weynaa, uu harka usii jiidanayay ilaa 12 mitir. Markii 13 nin oo raqda ku sugnaa ay isku dayeen inay jiidaane, way kari waayeen.
Shabeelku laba-toddobaad oo xiriir ah ayuu dhuuni la’aan joogi karaa dabadeedna mar-qura ayuu isla-raq ku cuni karaa 34 kilogram oo calaf ah. Xeryaha lagu karantiilana, waxaa la weriyaa in maalintii uu cuni karo 3—6 kilogram oo hilib ah.
Shabeelku, dabaasha ayuu ku daran yahay. Wuxuu kuleylka maalintii kaga nastaa diirrimaadka biyaha isaga oo ku dhex-muquura. Waxay webiga uga gudbi karaan 7 km oo dhirir ah. Waxayna dabaalan karaan in-ku-dhow 29 km maalin gudaheed. Halka neefkay dishaanna, ay ku dhex-qaadan karaan biyaha ama ay biyahaba ku dhex dilan karaan neef.
Shabeeshu waxay galmo iskugu golaadisaa da’da 3—4 sano jir. Halka Arbahana uu galmada ku bilaabo 4—5 sano jir. Isku-taggoodu waa joogto siiba wuxuu guudmar yahay bilaha Nofember iyo Abriil. Sidka Shabeelka waxaa loo shintiriyaa 93—112 maalmood. Celcelis ahaan 105 maalin. Wey mataaneeyaan—marna saddexeeyaan. Dhacdo ahaan, ugu yaraan halbay dhalaan; halka ugu badnaan ay lix dhalaan. Culeyska dhalaanku wuxuu gaaraa 680—1,400 garaam. Dhashu way indha la’yihiin; itaalna iskuma taraan. Shabeelkii ugu cimriga dheeraa wuxuu ku dhintay da’da 26 jir.
Xigasho–Buugga Duur-joogteenna oo uu qoray Qore Zakariya Hassan Muhumed “Hiraal”
Previous: Farrimaha Jaceylka
Next: Qeybtii 2aad: Wax Ka Baro Dhurwaaga “Waraabaha”
Daladda ugu ballaaran adduunka oo laga sameeyey Magaalada Makka.
Siyaasadda Maraykanka iyo Dunida Muslimka
Muslimad ‘salaan ay diiday awgeed’ loogu diiday dhalashada Faransiiska.